I-Chalé Jeriva - I-Airbnb
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguQuinta Borba
UQuinta Borba yi-Superhost
Indlu esemaphandleni iJerivá, njengoko siyibiza, yindawo yakudala neyodidi oluphezulu eyenzelwe abantu abathandanayo abafuna indawo yokuhlaliswa yindalo. Zonke iindawo ezitofotofo ezikwindawo ekhethekileyo nezidityanisiweyo kwindawo yokuhlala epheleleyo enegumbi lokuhlala, ikhitshi negumbi elinomnyango ophumela ngaphandle elinebhafu enamanzi ashushu amabini.
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yaseJerivá ingaphakathi kwindlu egcinwe kakuhle nendalo ejikeleze le ndawo, kodwa yimizuzu emihlanu kuphela ukusuka kwidolophu yaseItajaí nemizuzu eyi-10 ukusuka kwidolophu yaseBalneário Camboriú. Khawucinge ngendawo ephakathi esixekweni.
Iindawo ezikufutshane neFazenda eItajaí yeyona ndawo indala esedolophini kunxweme lweQatari. Ukongezelela kwisithethe, indawo yaseFazenda ikufutshane neziko lembali neevenkile kwaye ikufuphi neendawo zokuphuma kwiilwandle zaseAtalaia naseCabeçuda, ngokomzekelo. Le ndawo ineentlobo ezininzi zokutya kwesi sixeko, iindawo zenkcubeko onokukhetha kuzo, enye yezona marina zanamhlanje eBrazil, kunye neeprojekthi zokutsala amehlo.
Umbuki zindwendwe ngu- Quinta Borba
Ukufikeleleka okusisigxina ngexesha lokuhlala.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Fazenda